Amụma nzuzo - Yixing Holly Technology Co., Ltd.
Ndị na-eweta ọgwụgwọ ọgwụgwọ mmiri mkpofu zuru ụwa ọnụ
Ahụmịhe nrụpụta ihe karịrị afọ 14
Igwe na-ekpochapụ sludge
Sistemụ Etufuru Ikuku (DAF).
Sistemụ eji eme ihe polymer
Ihuenyo na ezigbo ihuenyo
Ihuenyo Bar Mechanical
Ihuenyo Drum Rotary
Ihuenyo enyo Drum(Nri Mpụga)
Ihuenyo enyo Drum(Nri dị n'ime)
Ihe diffuser seramiiki
Ihe diffuser nke Nanobbuble Tube
Igwe anaghị agba nchara Tube Diffuser
Igwe ihe nfụkasị afụ
Mgbasa ozi nzacha
Mgbasa ozi nzacha bio
Mgbasa ozi Bio Cord
Ụlọ elu jụrụ oyi
Amụma nzuzo a na-akọwa otu esi achịkọta, jiri na kesaa ozi nkeonwe gị mgbe ị gara ma ọ bụ zụọ ahịa na konsungmedical.com.
Konsungmedical.com gbasiri mbọ ike ichekwa nzuzo gị yana inye ndị ọrụ niile gburugburu ọnlaịnụ.Site na amụma ahụ, anyị ga-achọ ịgwa gị ka esi achịkọta, jiri na kesaa ozi nkeonwe gị mgbe ị gara ma ọ bụ zụta n'aka www.konsungmedical.com.Ọ bụ ọrụ na ọrụ anyị ichekwa nzuzo nke ndị ọrụ niile.
Kedu data onwe onye anyị na-anakọta?
Mgbe ị gara na saịtị ahụ, anyị na-anakọta ụfọdụ ozi gbasara ngwaọrụ gị ozugbo, gụnyere ozi gbasara ihe nchọgharị weebụ gị, adreesị IP, mpaghara oge yana ụfọdụ kuki arụnyere na ngwaọrụ gị.Na mgbakwunye, ka ị na-eme nchọgharị na saịtị ahụ, anyị na-anakọta ozi gbasara ibe weebụ ma ọ bụ ngwaahịa ị na-elele, weebụsaịtị webụsaịtị ma ọ bụ okwu ọchụchọ zoro aka na saịtị ahụ, yana ozi gbasara otu gị na saịtị ahụ.Anyị na-ezo aka na ozi a anakọtara na-akpaghị aka dị ka "ozi ngwaọrụ".
Anyị na-anakọta ozi ngwaọrụ site na iji teknụzụ ndị a:
- "Kuki" bụ faịlụ data etinyere na ngwaọrụ gị ma ọ bụ kọmputa ma na-agụnyekarị ihe nchọpụta pụrụ iche na-amaghị aha.Maka ozi ndị ọzọ gbasara kuki, yana otu esi agbanyụọ kuki, gaa na http://www.allaboutcookies.org.
- "Faịlụ ndekọ" soro omume na-eme na saịtị ahụ, ma na-anakọta data gụnyere adreesị IP gị, ụdị ihe nchọgharị, ndị na-ahụ maka ịntanetị, ibe ndị na-ezo aka/wepụ, na stampụ ụbọchị/oge.
- "Mgbama webụ", "mkpado", na "pixels" bụ faịlụ eletrọnịkị eji edekọ ozi gbasara otu esi eme nchọgharị na saịtị ahụ.
Na mgbakwunye, mgbe ịzụrụ ma ọ bụ nwaa ịzụrụ ihe site na saịtị ahụ, anyị na-anakọta ụfọdụ ozi n'aka gị, gụnyere aha gị, adreesị ịgba ụgwọ, adreesị mbupu, ozi ịkwụ ụgwọ (gụnyere nọmba kaadị kredit), adreesị ozi-e, na akara ekwentị.Anyị na-ezo aka na ozi a dị ka "ozi nhazi".
Mgbe anyị na-ekwu maka "ozi nkeonwe" na amụma nzuzo a, anyị na-ekwu maka ozi ngwaọrụ yana ozi ịtụ.
Kedu otu anyị si eji data nkeonwe gị?
Anyị na-eji Ozi Order nke anyị na-anakọta n'ozuzu iji mezuo iwu ọ bụla etinyere site na saịtị (gụnyere nhazi ozi ịkwụ ụgwọ gị, ịhazi maka mbupu, na ịnye gị akwụkwọ ọnụahịa na/ma ọ bụ nkwenye iwu).Ọzọkwa, anyị na-eji Ozi Order a:
- Kpọtụrụ gị;
- Nyochaa iwu anyị maka ihe egwu ma ọ bụ aghụghọ nwere ike;na
- Mgbe ọ dabara na mmasị gị kesara anyị, nye gị ozi ma ọ bụ mgbasa ozi gbasara ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị.
Anyị na-eji ozi ngwaọrụ anyị na-anakọta iji nyere anyị aka nyocha maka ihe ize ndụ na wayo (ọkachasị, adreesị IP gị), yana n'ozuzu ya iji melite na ịkwalite saịtị anyị (dịka ọmụmaatụ, site na ịmepụta nyocha gbasara otu ndị ahịa anyị si chọgharịa na imekọrịta ihe. saịtị ahụ, na iji nyochaa ọganihu nke mgbasa ozi ahịa na mgbasa ozi anyị).
ANYỊ na-ekekọrịta data nkeonwe?
Anyị anaghị ere, ịgbazinye ego, mgbazinye ma ọ bụ kpughee data nkeonwe gị nye ndị ọzọ.
Anyị nwere ike imelite amụma nzuzo a site n'oge ruo n'oge iji tụgharịa uche, dịka ọmụmaatụ, mgbanwe na omume anyị ma ọ bụ maka ọrụ ndị ọzọ, iwu ma ọ bụ usoro iwu.
mail at lisa@holly-tech.net
Ka ọ dị ugbu a, ihe karịrị 80% nke ngwaahịa anyị na-ebupụ karịa mba 80, gụnyere Southeast Asia, Europe, North America, Latin America, Africa.
N'ihi na jụrụ ajụjụ banyere anyị ngwaahịa ma ọ bụ pricelist, biko hapụ anyị na anyị ga-aka n'ime 24 awa.
Obodo Gaocheng, Gaocheng Town Yixing, Jiangsu Province, China